Bit By Bit - Unxulumano - 6.7.3 Cinga zokuphatha uphando njengoko oluqhubekayo, kungekhona gcisa
Iingxoxo malunga zokuziphatha zophando lwezentlalo kweminyaka yedijithali rhoqo eyenzekayo phantsi yokubini; umzekelo, njengesifo Emotional mhlawumbi ezisesikweni okanye akuzange ngokweenqobo. Le ngcamango yokubini polarizes ingxoxo, ethintela imizamo yokuphuhlisa izithethe ekwabelwana, ikhuthaza ubuvila ngokwasengqondweni, kwaye absolves abaphandi onombhalo "ngokweenqobo" kuxanduva lwabo ogama uphando ukwenza ngaphezulu nemikhwa leyo esemthethweni. Iincoko ezininzi onemveliso ukuba ndikhe ndabona ezibandakanya zokuphatha uphando ukuhamba ngaphaya ngcamango okubini esiqhubekayo ingcamango Iinqobo nophando.
Ingxaki ebalulekileyo yokwenza ingcamango ebomini yokuziphatha ngophando kukuba iphola ingxoxo. Ukubiza nge-Emotional Contagion "ukungacwangcisi" kuyayigxina kunye neentlondi zinyani ngendlela engenakunceda. Kunoko, kunceda kwaye kulungile ukuthetha ngokuthe ngqo malunga neengcamango zesifundo ofumana ingxaki. Ukufuduka ekucingeni kwebhinqa kunye nolwimi oluphucuzayo akusikho umnxeba ukuba sisebenzise ulwimi oludakeni ukufihla ukuziphatha okungahambi kakuhle. Kunoko, ingcamango eqhubekayo yokuziphatha iya kucinga ukuba, kukhokelela kulwimi oluthe ngqo nolumkileyo. Ukongezelela, umxholo oqhubekayo wokuziphatha ngophando ucacisa ukuba wonke umntu-nokuba ngabaphandi abenza umsebenzi sele sele bejonge "imilinganiselo" -bamele bazame ukudala ibhalansi yokuziphatha ebhetele ngakumbi emsebenzini wabo.
Inzuzo yokugqibela yokuqhubela phambili ekucingeni okuqhubekayo kukuba kukukhuthaza ukuthobeka kwengqondo, okufanelekileyo ekujonganeni nemingeni enzima yokuziphatha. Imibuzo yokuziphatha ngophando kwixesha ledijithali inzima, kwaye akukho mntu ufanele ukuba aqiniseke kakhulu ngamandla akhe okufumanisa indlela efanelekileyo yokusebenza.